Ho tonga amin'ity telovolana ity ny Realme 3, ary hanao izany amin'ny fakantsary 48 MP | Androidsis
Ho tonga amin'ity telovolana ity ny Realme 3, ary hanao izany amin'ny fakantsary 48 MP
Realme dia hampiditra telefaona misy sensor 48 MP, na dia tsy mazava aza raha ho anisan'ny andiany Realme 3 na tsia. Amin'ny antsipiriany, Madhav Sheth, izay CEO an'ny Realme, dia nanambara ny sasany amin'ireo drafitry ny orinasa ho an'ny 2019.
Tamin'ny faran'ny taona lasa nanova ny politikan'ny tsena ny governemanta indiana. Izany dia nandrara ny fivarotana an-tserasera, toa an'i Amazon sy Flipkart (be mpampiasa ny Realme), tsy hivarotra vokatra avy amin'ny orinasa irery ary hanao fifanarahana mitovy amin'izany. Noho izany, ny Realme 2 Pro dia hamidy manomboka amin'ny volana febroary (daty hanankinana ny lalàna). Na eo aza izany dia mikasa ny hitondra fitaovana hafa ilay orinasa.
Ny finday avo lenta manaraka ao amin'ny Orinasa mahaleo tena Oppo Izy io no ho maodely manana fahombiazana avo indrindra amin'ny katalaoginy. Na izany aza, manaraka ny andalan'ny mpanamboatra iray ihany, dia ho eo afovoany izany, na dia misy toetra sy famaritana mifaninana kokoa aza: ity no Realme 3.
Madhav Sheth no nilaza izany ny Realme 3 dia havoaka amin'ny Q2019 XNUMX any ho any. Na izany aza, hentitra be izy amin'ny vidiny sy ny famaritana ny telefaona, indrindra amin'ny fiezahan'ny Realme manavaka ny traikefa amin'ny Realme 2 original. Ity no telefaona fakantsary 48 MP niasan'ny marika.
Ankehitriny, miresaka indray amin'ireo politika nomen'ny governemanta Indiana, ity telefaona ity dia azo inoana fa amidy amin'ny magazay ara-batana. Io dia hampiakatra ny vidiny amidy, satria lafo toy izany ny fomba toy izay amin'ny fivarotana an-tserasera. Na eo aza izany dia nanambara ny orinasa fa hikaroka fomba iray tsy hiantraikany amin'ny vidiny izany. Niara-nanatontosa fifanarahana nifanaovana tamin'i Reliance Digital sy My Jio any amin'ny tanàn-dehibe 130 hizarana ny vokatra. Izy io koa dia hanana teboka eo amin'ny 20 eo ho eo hanamorana ny fidirana amin'ny finday Realme.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » Ho tonga amin'ity telovolana ity ny Realme 3, ary hanao izany amin'ny fakantsary 48 MP
Ny Elephone A6 dia voasivana ao anaty horonan-tsary miaraka amin'ny fakantsary telo misy azy: tsy ho ela dia ho tonga eny amin'ny tsena izy io
Xiaomi dia manamafy fa miasa amin'ny MIUI 11 izy ireo